SonyLIV အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
3.5 | 100,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် XAPK（31.2MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် SonyLIV: Originals, Hollywood, LIVE Sport, TV Show
ကမ္ဘာ့အားကစားနှင့် Binge ထိုက်တန်သောပြပွဲနှင့်ရုပ်ရှင်များ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလှုပ်ရှားမှုအတွက်တစ်နေရာတည်းကိုရပ်တန့်ရန်နေရာရှာနေပါသလား။ Sonyliv သည်သင်၏ ဦး တည်ရာဖြစ်သည်!
Sonyliv အက်ပ်တွင်ပါ0င်သည့်အကြောင်းအရာများကို0ယ်ယူပါ။ - ချယ်လ်ဆီးအသင်း VSLALARREAL, UFC သည်ညဥ့်များ, WWE အထူး, NXT, NXT, Smackdown & Raw, 2022 ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်ဥရောပခြေစစ်ပွဲနှင့် J Lebue 2021 ကို Sonyliv app တွင်သာဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်အားကစားသတင်းများ, ရမှတ်များနှင့်တိုက်ရိုက်ရလဒ်များနှင့်အတူတက်ထားပါ။ အရေးယူမှု၏တစ်စက္ကန့်ကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့။ (အိန္ဒိယနှင့်အိန္ဒိယတိုက်ငယ်များတွင်သာရနိုင်သည်)
• Sonyliv မူရင်းဝက်ဘ်ဆိုက်၏ Sonyliv app တွင်ပါ0င်သော Sonyliv ၏နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံ စီးရီး။ • Shantit Kranti ကဲ့သို့သော Premium စီးရီးအသစ်နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးရီးများကဲ့သို့အသံအတိုးအကျယ်ကိုဖွင့်ပါ။ •အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဇာတ်လမ်းများကဲ့သို့။ သင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်း5ခုအထိသင်ဖန်တီးနိုင်သည်။ •အနှောင့်အယှက်မပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အထုပ်ကိုစာရင်းသွင်းပါ။ Sony Set နှင့် SAF တီဗီတွင်ရှိသောသင်အကြိုက်ဆုံးပြပွဲများ၏နောက်ဆုံးဖြစ်စဉ်များကိုဖယ်ရှားပါ။ • Sony Set နှင့် SAB တီဗီတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်စဉ်များကိုကြည့်ပါ။ •အတူတူပင်မျက်နှာပြင်2ဖန်သားပြင်ကိုကြည့်ပါ အချိန်။
- Premium Web Series နှင့် Live Previes Solds • Sonyliv အတွက် Premium Premiere စီးရီးနှင့်တိုက်ရိုက်အားကစားလှုပ်ရှားမှုများကိုသတ်မှတ်ပါ။ • Tamil, Telugu & Marathi ရုပ်ရှင်ရုံတိုင်းကိုခံစားပါ VAAZHL, Vivaha Bhojanambu, Pian B & Shantit Kranti တို့က KBC Play ကိုဖွင့်ပြီး KBC Play ကိုဖွင့်နိုင်သည်။ 2020 ခုနှစ်တစ်လျှောက် KBC Play တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်သင်ကစားနိုင်သည်။ သင်ကစားပြီးနောက်သင်ကစားပြီးနောက်သင်ကစားနိုင်ပြီးနေ့တိုင်းဆုရရှိသူ 10 ယောက်ကိုပေးနိုင်လိမ့်မည် 1 သိန်းရူပီး၏ဆုလာဘ်။
• Hilary Cursimran Khamba နှင့် Amit Trands တို့နှင့်ပြသသည်။
shantit kranti-amit tranti- အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းသုံးယောက်၏စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောခရီး Bhadipa နှင့် TVF မှဖန်တီးထားသော streaming web series ။
• Telugu KBC, 'Meelo Evaru Koteeswarudu' Hoste Nagarjuna မှ D မှ။
• Ajunhi Barsat Aahhe သည် Sonyliv တွင်နေထိုင်ခြင်းကိုကြည့်ရှုရန် Tamil Fargesat Aahe ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Tamil Jonsat Aahe သည် NAVIRARAN တွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့် Vurrarasu မှရေးသားထားသည့်အတွက်ပြသသည်။ GV Prakash Kumar နှင့် Mahima Nambiar, Tamilatual Nambiar, Kasada Thapara ကို Chimbu Man Bary Black Black Archets ၏ R. Ravindran တို့နှင့်အတူလေ0င်ကြည့်ပါ။ • Chimbu Prespress ၏ R. Ravindran - ဘဏ်ဘောလုံးအသင်းများအတွက်ဘဏ် 2021 ခုနှစ်၏ထိပ်ဆုံးဂျပန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လိဂ် Juue 721 ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများကိုဖမ်းယူပါ။ • WWE အထူးအထူး - Wrestle Mania Backlash / Smackdown / NXT / NXT
Sonyliv မူရင်းအသစ် - Hindn / English-Brathing Extreme Extreme Extreme Extreme Societed International Office Off-Road Racing Secreting Secial Suvs Seconing Secial Suvs ကိုအသုံးပြုသည်။ အာတိတ်။
တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း ပုရစ်, တင်းနစ်, တင်းနစ်, အိုလံပစ်အိုလံပစ်, WWE, ဘတ်စကတ်ဘော, E-Sports တို့အတွက်အိုင်းယွန်း, သြစတြေးလျ, NBA, UFC, -in-app feature, WWE စကြဝ universe ာကိုမပြတ်မတောက်, WWE RAW, SMAREDDOWN, NXT နှင့်အဓိကပေးချေမှုနှုန်းဖြစ်ရပ်များအားလုံးပါ0င်ပါ။
WWE အထူး - MOW BANK ON BANK BANK BANDESS MOMARES 211 သည်သင်၏စောင့်ကြည့်စာရင်းတွင်ပါ0င်သည်။ အသာပုတ်ပါ။
တီဗွီအစီအစဉ်များအရရုပ်ရှင်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သူများ, Live Channels
Maharani, Chutaar, Chutaar Crorepati, Kon Honaar Crorepati, BR> Super Dancer 4, Wagle Sharma Duniya, Kapil Sharma Ka Ooltah Chashmah or indian idol? - Sonyliv app တွင်ကြည့်ပါ။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော Sony Network လိုင်းများကိုစမ်းကြည့်ပါ။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဇာတ်ကောင်များနှင့်အတူပျော်စရာကောင်းသောဆုများနှင့်ပျော်စရာကောင်းသောဂိမ်းများကိုကစားပါ, တောင်း! Sonyliv Platform တွင်စစ်ဆေးပါ။
ဘာအသစ်လဲ SonyLIV: Originals, Hollywood, LIVE Sport, TV Show 6.15.10
How to Watch SonyLIV in USA [February 2022 Updated]